China Medical Oxygen Concentrator သက်ကြီးရွယ်အိုများဆေးရုံထုတ်လုပ်သူများနှင့်ထုတ်လုပ်သူများအတွက်မြင့်မားသောအောက်စီဂျင်ပါဝင်မှု 10L | Hemeikaineng
အောက်စီဂျင်ပါဝင်မှုဆိုသည်မှာအောက်စီဂျင်ထုတ်လုပ်သည့်စက်အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ၎င်း၏နိယာမမှာလေကြောင်းခွဲခြင်းနည်းပညာကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ ပထမ ဦး စွာ၊ လေသည်သိပ်သည်းဆမြင့်မားစွာဖြင့် compressed လုပ်ပြီးနောက်လေထဲရှိအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီ၏ငွေ့ရည်ဖွဲ့မှုခြားနားချက်ကိုသတ်မှတ်ထားသောအပူချိန်တွင်ဓာတ်ငွေ့နှင့်အရည်ကိုခွဲထုတ်ရန်အသုံးပြုသည်။ ထို့နောက်၎င်းကိုထပ်မံပြင်ဆင်ခြင်းဖြင့်ရရှိသည်။
၁။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ။ လူနာများကိုအောက်စီဂျင်ထောက်ပံ့ပေးခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာနှင့် ဦး နှောက်ဆိုင်ရာသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများ၊ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာစနစ်၊ နာတာရှည်အဆုတ်ရောင်ရောဂါနှင့်အခြားရောဂါများအပြင်ဓာတ်ငွေ့အဆိပ်သင့်ခြင်းနှင့်အခြားပြင်းထန်သော hypoxia ရောဂါများကိုကုသနိုင်သည်။
၂။ အိမ်တွင်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု - အောက်စီဂျင်ဖြည့်တင်းခြင်းနှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၏ရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ရန်အတွက်အောက်စီဂျင်ထောက်ပံ့ပေးခြင်းဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်၏အောက်စီဂျင်ထောက်ပံ့မှုအဆင့်ကိုတိုးတက်စေခြင်း။ ၎င်းသည်အလယ်အလတ်နှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်မှုအားနည်းသူများ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများ၊ ကောလိပ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲကျောင်းသားများနှင့် hypoxia အမျိုးမျိုးရှိသည့်အခြားသူများအတွက်သင့်တော်သည်။ ၎င်းသည်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုဖယ်ရှားရန်နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်ပြီးနောက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများကိုပြန်လည်ထူထောင်ရန်အတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။
3. အောက်စီဂျင်ပါဝင်မှုသည်မြို့ကြီးများ၊ ကျေးရွာများ၊ ဝေးလံခေါင်သီသောဒေသများ၊ တောင်တန်းများနှင့်ကုန်းပြင်မြင့်ရှိအသေးစားနှင့်အလတ်စားဆေးရုံများ၊ ဆေးခန်းများ၊ ကျန်းမာရေးစခန်းများအတွက်သင့်တော်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သူနာပြုအိမ်များ၊ အိမ်အောက်စီဂျင်ကုထုံး၊ အားကစားလေ့ကျင့်ရေးစင်တာများ၊ ကုန်းပြင်မြင့်စခန်းများနှင့်အခြားအောက်စီဂျင်သုံးစွဲသည့်နေရာများအတွက်လည်းသင့်တော်သည်။
4. စက်မှုထုတ်လုပ်မှု: စက်မှုထုတ်လုပ်မှုတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
၅။ တိရိစ္ဆာန် - တိရစ္ဆာန်တွေကိုအောက်စီဂျင်နဲ့ကုသပေးရမယ်။
ဤထုတ်ကုန်သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဖောက်သည်များနှင့်အလွန်ရေပန်းစားပြီး ၀ ယ်ယူသူအမြောက်အများကိုကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည်အရည်အသွေးကောင်းပြီးစျေးနှုန်းနှင့်လည်းထိုက်တန်သည်။ သင်နမူနာလိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့အား ဦး စွာဆက်သွယ်နိူင်သည်။ အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်သင့်အတွက်နမူနာများကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးနိုင်သည်။
ထုတ်ကုန်အမည် 10L အောက်စီဂျင်အာရုံစူးစိုက်မှု
စီးဆင်းနှုန်း 0-10L / min
သန့်ရှင်းစင်ကြယ် 93 ± 3%
အလုပ်လုပ်ဗို့အား AC: 220 / 110V ± 10% 50 / 60Hz ± 1
ထွက်ပေါက်ဖိအား 0.04-0.08Mpa (ဖိအား> 0.08 ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်)
အတိုင်းအတာ 365 x 400 x 650mm (L * W * H)
အသားတင်အလေးချိန် ၃၁ ကီလိုဂရမ်
စုစုပေါင်းအလေးချိန် ၃၃ ကီလိုဂရမ်
စံ function ကို over Alarm, Power Failure Alarm, Timing Function, အလုပ်လုပ်သောနာရီများပြသခြင်း။
optional ကိုရာထူးအမည် အနိမ့်သန့်ရှင်းမှုနှိုးစက်, Nebulizer function ကို, SPO2 အာရုံခံကိရိယာ, Flow Splitter ။
4. စီးဆင်း splitter5စီးဆင်းမှုသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။
5. ကြီးမားသောနေရာရွှေ့ပြောင်းခြင်း Compressor သည်အခြားသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်များထက်သက်တမ်း ၃၀% ပိုရှည်သည်။
7. အရည်အသွေးအာမခံ:2နှစ်။
၁။ OEM (≥100 pcs) / ODM ။
2. ကုန်ပစ္စည်းများသည် CE, FDA, ISO, ROHS အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုကျော်လွန်ပြီးဖြစ်သည်။
4L / 5L / 8L / 15L အောက်စီဂျင်ပါဝင်မှုရှိသည့်အပြင်နှစ်စီးစီးဆင်းမှုနှင့်စိုထိုင်းဆကိုရရှိနိုင်သည်။
ရှေ့သို့ ဝတ္ထု Coronavirus (COVID-19) Antibody IgM, IgG Test Kit
နောက်တစ်ခု: လျှပ်စစ်တုန်ခါမှုအမြှုပ် Roller Fitness Sport Recovery ယောဂအနှိပ်